Himata lakkoofsaa gara diraatti jijjiira.
Himata: Himata lakkoofsaa kamiyyuu.
Faankishiniin Str jijjiiramaa lakkoofsaa, ykn bu'aa herreegaa gara diraatti jijjiira. Lakkoofsotni nagatiivii mallattoo hir'isuutiin durfamu. Lakkoofsotni poozatiiviin iddoo duwwaadhaan(bakka mallattoo ida'uu) durfamu.